केही खोज्ने आश | अमेत्य
बिहानको ६ बजेको छ, स्विपरले कुचो लाँउदा निस्केको ख्यार्‍र ख्यार्‍र आवाज एक तमासले आइरहेको छ अनी छेवैको मन्दिरको घण्टाका ध्वनी क्रमश: बाक्लिदै छन् । बिहानीपख भएर हो शायद, हल्का चिसो मौसममा संवाददाताको यो पागलपन एक प्रकारले रमाइलै लागिरहेको छ । चिया पसलेको घडीले सात बजेको संकेत गर्‍यो ।
एक युवक हातमा जल लिइ नांगो खुट्टा मन्दिर तर्फ जाँदै थिए, लिदै गरेको चिया टेबुलमा छाडि हानिए म तिनै युवकतर्फ ।
” निकै आस्तिक हुनुहुन्छ जस्तो छ नि ?” मन्दिरको सिढीं झर्दै गर्दा मेरो प्रन प्रश्न तेर्सियो उनिमाथि ।
” हेर्नुस्, नास्तिकहरुपनि एक अद्रिश्य शक्ति मानिरहेका हुन्छन् जसलाई हामी भगवान भन्छौं ” घाँटिमा लटकिरहेको मेरो ID Card पढ्न खोज्दै ति युवाले भने ।
” पढ्ने र केही गर्ने उमेरमा मन्दिर मन्दिर दगुर्छ भनी चिन्ता गर्नु हुन्छ बुवाआमा तर हल्का आस्तिक भइ भगवान सम्झदा राम्रो, नराम्रो छुट्याउन सक्ने र एक सिमा, परिधिभित्र आफुलाई राख्न मद्घत मिल्ने आदी कुरा उहाँहरुलाई बुझाउनै बाँकी छ । पुरै लित्ती तरिकाले म हिंडेको हैन, आँफैलाई छाडा हुन नदिन मात्र मन्दिर आएको हो ।” उनको नांगो खुट्टातिर संकेत गर्दै म प्रश्न तेर्स्याउन खोज्दै थिए, शायद भावै बुझेर हो, उनले उत्तर दिइहाले प्रश्नै सोध्न नपाईं ।
म चिया पसल फर्किदा मेरो पिउदै गरेको बाँकी चिया हिडिसकेको रहेछ मलाई नपर्खिकनै ” ओ दाजु! अघिको आधा चिया पाइन्छ कि पाइन्न हँ ?”
अब भने चहलपहल दरिलो हुँदैछ, अफिस जाने ट्याम जो हुँदैछ । बिहान बिहानै केही भेटिसकेको यो ‘म’ पात्रले यती चाडै अर्को केही चिज भेट्न लाग्दा मेरो मन एक बच्चाझै फुद्रुक् फुद्रुक् उफ्रदै थियो । अफिस हिड्दै गरेका एक कर्मचारी तल झरेको एकको डलर टिप्दै थिए ।
” तपाईंको हो?” म उनको अगाडि ठिङ्ग उभिएको देखी अलिक झस्कदै उनले सोधे ।
” के गर्नु हुन्छ यो एकको डलरलाई ?” मैले मेरो ID देखाउदै सोधें । ID नदेखाए सुन्न खोजे भन्दा फरक उत्तर पाइन्थो होला जुन अलि कर्णप्रिय नहुन पनि सक्थे ।
” बाटैमा माग्ने भेटे उसैलाई दिन्छु, घरसम्म यो पुग्यो भने खुत्रुकेमा हाल्छु तर मन्दिरमा गएर भेटी चैं दिन्न ।” हल्का आत्मिय मुस्कान मिश्रित उत्तर पाँए मैले ।
” माग्नेलाई दिनु नै थियो त टिप्नु भयो किन ?”
” यिनै लक्ष्मीको लागि दिनरात दगुर्नु छ अनि तिनैलाई बाटामा नै भेट्दा अपहेलित गर्न पनि त भएन नि !”
” तर यो त एकको डलर हो नि !”
” के फरक पर्छ र, लक्ष्मी कुनै पनि रुपमा आउन सक्छिन्, अनि फेरी यैं एकको डलरले कसैको पेट पनि भर्न सक्छ ।
दस बजेतिर भेटिएको मेरो यो केही पछि केही नै भेटिएको छैन, भेटिएका पनि निचोडिएको कागती जस्ता छन्,थोप्पो रसै नभएको । यो चिया पसले चिया बनाउँदै, मलाई हेर्दै,गर्दैछ,के सोच्दै होला मेरो बारेमा ? चार बजिसक्यो , छ बजेदेखी आएर एउटा टेबुल कब्जा जमाएर बसेको छ, पागल हो कि क्या हो ? भन्ने सोच्दो हो । त्यो फुच्चे चैं के सोच्दो हो,केही लेखिरहँदा विद्वानै हो भनी सोच्दो हो । धन्न म ज्याद्रो चैं रहेछु, Laptop र कलमको भरमा एकै ठाउँमा ६ देखी ४ बिताउन सक्ने ।
छ बजिसकेको छ, बिस्तारै साँझको रमाइलो बातावरणमा प्रवेश गर्दैछ माहोल ।
अब यति नै होला भनी आश मार्दै थिए, मेरो छेवैबाट एक युवक केही बोल्दै जाँदै थिए तर उसको बोली न मोबाईलमा बोलेजस्तो सुनिन्थो न उ आफुसँग नै बोलेजस्तो महसुस हुन्थो ।
उनिसँग गएर कुरो बुझ्दा थाहा भयो उनि अंग्रेजीमा Self Conversation गर्दै रहेछन् अर्थात अर्को ब्यक्ती आँफैलाई बनाएर कुराकानी गर्नु । “English मा कुरा गर्ने साथी नपाएर हो ?” मैले सोधे ।
“हैन । साथीसँग कुरा गर्दा एउटै Topic मा अल्झिनुपर्ने हुन्छ तर Self Conversation गर्दा जता पनि जान मिल्छ,त्यसैले” प्राय: हरेक साँझ यसरी नै हिंड्ने यि साथी क्याम्पस पढ्दा रहेछन् ।
“English Improve गर्न हो ?” फेरी सोधें । “हो। बोडिङ्गमा पढेको भए यस्तो गर्दै हिंड्न पर्दैनथ्यो होला । कोही कोही त खुस्केको भनी भन्ठान्छन् ।” हल्का भावुक हुँदै दिएको उनको उत्तरले सरकारी स्कुलको अंग्रेजितर्फको वेवास्तापन तर्फ गुनासो जनायो । “अंग्रेजी अहिले अपरिहार्य भएको छ र पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली यो बुझ्दैन या बुझेर पनि किन हो बुझ्न चाहदैन ।”
केही पाउँदिन कि भन्ने डरै डरमा बढेको मेरो पाइलाले तीन तीन केही भेट्टाउँदा म आँफैमा प्रफुल्लित हुँदै थिए अनी सोचें “केही पाउने चाह छ भने मात्रा मात्र चाहिने रहेछन् तिक्ष्ण आँखाहरु जसका लेन्सले रेटिनामा मात्र नभै सिधै मष्तिष्कमा ढकढक गर्न सकोस् ।
” पत्रीकामा मेरो पसलको नाम पनि आओस् ल दाजु ” चियाको पैसा बुझाउदा चिया पसले आग्रह गर्दै थियो । ” रामुको चिया पसल ” बाइक हुँइकिदासम्म उ कराँउदै थियो।
Note : December 13, 2007 at 10:08 am Facebook 🙂